SAWIRRO: Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada oo loo soo xiray tababar socday Muddo Saddex bilood ah | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
SAWIRRO: Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada oo loo soo xiray tababar socday Muddo Saddex bilood ah
Ciidamada ilaalada Madaxtooyada ee Ururka 60-aad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta loo soo xiray tababar u socday muddo saddex bilood ah.
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa maanta soo xiray tababarka Cutubyo ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, isagoo socday mudo 90-cisho ah.
Tirada ciidamada ayaa tababarka qaatay ayaa gaaraya 130-askari, waxaana inta uu socday lagu barayay tababar la xiriira howlaha Waajibaadkooda ciidanimo iyo siday uga soo dhalaali karaan howlaha loo igmaday.
Goobta tababarka loogu soo xirayay Ciidamada ayaa waxaa ku sugnaa Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Taliyaha Ciidamada 60-aad ee ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya Gaashaanle sare Cali Maxamed Ali afcadey, Abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Generaal C/llaahi Cali Caanood iyo Saraakiil ciidan,kuwaasi oo dhamaantood ciidanka tababarka dhameystay ku amaanay dhabarka adeega ay muujiyeen mudada uu socday.
Taliyaha Ciidamada 60-aad ee Ururka ilaalada madaxtooyada Cali Maxamed Ali Afcadey, wuxuuna askarta tababarka dhameystay ku amaanay dadaalka ay muujiyeen mudadii uu tababarka socday.
Ugu danbeyntii, Wasiirka Gaashaandhiga Dowladda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan oo soo xiray Tababarka ayaa bogaadiyay dhabarka adeega Ciidanka ay muujiyeen mudada tababarka uu socday,isagoona tababar kale goobta uga furay Ciidan kale oo ka tirsan Ururkaasi.
Ururka 60-aad ee Ciidanka ilaalada madaxtooyada oo ah Ciidan gaar ah ilaalinta madaxtooyada iyo madaxda Qaranka ayaa lagu xusuustaa doorka ay ka qaateen socdaalkii Nabada uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu ku tagay Maamulada Puntland iyo Galmudug,kuwaasi oo si weyn u sugayay amaanka Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxame C/llaahi Farmaajo.
Previous articleC/kariin Guuleed oo su’aal ka keenay Musuqa Dowladda Farmaajo & Kheyre: “Xagee Salaadu iska qaban la’dahay..?”
Next articleShaqadii Bajaajta oo laga joojiyay magaalada Garowe Iyo Darawallada Mootooyinka oo la xiray